Haweenay la qabtay iyadoo diyaarad si qarsoodi ah ula raacaysa wiil 6 maalmood dhallan
Monday July, 13 2020 - 14:23:34
Haweenay Maraykanka u dhalatay ayaa lagu eedeeyay in ay isku dayday in ay si sharci darro ah dalka Philippines ugala baxdo wiil maalmo kali ah dhallan.
Jennifer Talbot oo 43 jir aha ayaa Arbacadii lagu xiray garoonka caalamiga ah ee Ninoy Aquino ee ku yaalla magaalada Manila.
Wiil lix maalmood jira ayaa la sheegay in laga helay boorsadii ay wadatay, iyada oo isku dayaysay in ay raacdo diyaarad u socotay dalka Maraykanka.
Masuuliyiinta ayaa Jennifer ku eedeeyay in aysan shaqaalaha laanta socdaalka ku wargelin in ay canug yar wadato.
Waxaada dambibaarisa qaranka ee magaceeda loo soo gaabiyo NBI ayaa sheegay in Jennifer "ay isku dayday in ay qarsato oo la baxdo wiilka yar iyadoo aan la ogaan".
Aabaha iyo hooyada dhalay wiilka yar ayaa lagu soo oogay dacwad iyaga oo loo cuskanayo sharciga badqabka carruurta, sida ay masuuliyiintu sheegeen. Wiilka ayaa la geeyay goob ay dawladdu leedahay oo carruurta lagu xannaaneeyo.
Jennifer oo ka timid gobolka Ohio ee dalka Maraykanka ayaa ku guuldarraysatay in ay soo bixiso sharciga wiilka ama waraaqdii diyaaradda lagu fuuli lahaa ee tilmaamaysay kuriga uu ruuxu ku qoran yahay, ayay tiri waaxda dambi baarista.
Iyada oo qabta maro jaale ah isla markaasna gacanta ka xiran ayay Jennifer ka soo muuqatay shir jaraa'id Khamiistii, ka dib markii lagu dhawaaqay dacwadda ka dhanka ah, waxba kama aysan dhihin eedaymaha loo soo jeediyay.
Image captionJennifer Talbot ayaa shir jaraa'id ka soo muuqatay Khamiistii
Haddii lagu helo dambigaas waxay wajihi kartaa xabsi cimrigaa ha ku furto ah, sida uu saxafiyiinta u sheegay Manuel Dimaano oo ah masuulka waaxda dambibaarista u qaabilsan garoonka.
Masuuliyiinta safaaradda Maraykanka ayaa lagu wargaliyay xabsiga Talbot, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AP.
Markii la xiray ka dib ayay Jennifer soo bandhigtay warqado ay ku sheegtay in ay yihiin sharcigii loogu ogolaaday in ay wiilka ku gayso Maraylkanka, sida ay sheegtay waaxda dambibaarista ee magaceeda loo soo gaabiyo NBI.
Balse hooyada canugu ma aysan sixiixin waraaqahaas, sida ay hay'addaasi sheegtay.
Taliyayaal Ciidan Oo Xabsiga Garoowe Lagu Guray Iyo Arrimo Culus Oo Lagu Qabtay
11/07/2020 - 13:56:13
Wasiirka Arrimaha Dibada Somaliland Oo Safar Qarsoodi Ah Ku Tagay Dalka Congo
06/07/2020 - 09:54:53
Gudaha:-Fanaaniinta Xamda Qaali Iyo Barwaaqo Qalanjo Oo Xoriyadoodii Dib U helay.
24/06/2020 - 16:19:46